Manao Sary ireo Herisetra Niainany Teny Amin’ireo Arabe Pakistaney i Shehzil Malik · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2016 12:29 GMT
Shehzil Malik Sary: Miaraka amin'ny fanomezan-dalana avy amin'i Shehzil Malik
Nipoitra voalohany tao amin'ny PRI.org ity tantara nosoratan'i Andrea Crossan ity tamin'ny 27 Oktobra, 2016. Averina zaraina eto indray ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
I Shehzil Malik dia mpamorona endrika sy mpandravaka sary, monina ao Lahore.
Toy ny ankamaroan'ny vehivavy maro ao Pakistàna (sy any an-kafa), isa-maraina izy dia manao izay akanjo heveriny fa tsy dia hanintona lehilahy araka izay azony atao — sioka, ireo antso feon-tsaka, ireo jerijery.
Fa tonga ihany ny jery, kanefa. Tena leo tanteraka tamin'izany fomba fitondrana azy izany i Malik ka nanao sary hanehoana ny tolona ataon'ny vehivavy Pakistaney izay mahatsiaro sotasota eny imasom-bahoaka.
Mampiseho vehivavy mandeha miaraka amin'ny tànany mifampiditra amin'ny sandriny ny sary mainty sy fotsy.
Miondrika ny lohany, ny tarehiny manao tarehy ratsy kely.
Endri-dehilahy lehibe noho ny tena izy no mivandraka any aminy, manao fihetsika sy feo, mijery amim-pitsiriritana.
Sary: Fanomezan-dalana avy amin'i Shehzil Malik
Fanontaniana mikasika ny endriny ihany ireo voasoratra manerana ny vatany ireo. ”Mbola tsy ampy ve ny halavan'ny lobako? Tokony nosaronako àry ve ny lohako?” Misy soratra hoe ”hoditra” ireo kitrokeliny miseho. Misy maso hatramin'ireo ahidratsy eny amin'ny tany aza ; mijery azy tsara izy ireo.
Nizara ny sary tao amin'ny Tumblr-any i Malik. Mamaritra ny fomba ampisehoan'izany ny zavatra niainany izy.
”Te-hivoaka isanandro any ivelan'ny trano aho sy handeha any amin'ny kianjako ary tena tsy nampahazo aina ny fisiako teo amin'izany toerana natao ho an'ny be sy ny maro izany. Ary ity sary ity dia, raha tsorina, no zavatra tsapako tamin'izany fotoana izany. Mety nampanahy ahy ny momba ny endriko tamin'izany, nampanahy ahy ny momba ireo olon-kafa sy ny toy ny hoe, tsy fantatro raha tonga saina amin'ny fiantraikan'ny ataony amin'ny toetra anatiko ny olon-kafa, nandeha an-tongotra fotsiny aho,” manazava izy.
Miakanjo maontina ny vehivavy any Pakistàna — matetika miaraka amin'ny tànana na tongotra voasarona ary matetika koa miaraka amina saron-doha.
Fa na ny vehivavy manao ireo lafik'akanjo rehetra ireo aza dia mbola hiharan'ny sotasota ihany.
”Any Pakistàna, mahaliana ireo toerana natao ho an'ny daholobe satria dia tena fanavahana ny mahalahy na vavy izy ireo. Nankaty ireo vahiny namako ary niteny ry zareo ‘Shehzil, tsy misy vehivavy mihitsy eraky ny arabe, fa aiza ry zareo?’ Ary hoy aho hoe, tsia feno vehivavy eraky ny làlana raha ny marina. Ohatra, manana ny Liberty Market izahay, izay tena feno vehivavy.”
Iray amin'ireo sarin'i Shehzil Malik. Sary : Fanomezan-dalana avy amin'i Shehzil Malik
”Sady misy ny mpivaro-damba rehetra sy firavaka ary ny ankamaroan'ireo feon-kiraro renao dia vehivavy daholo, sady mahatsiaro ho mahazo aina izahay rehefa mandeha eny. Eny, mety hijery ela anao ireo lehilahy ao, fa manana hery hafa ireo mpivarotra satria ianao ilay iray mividy. Noho izany dia tena hafa noho ireo teny amin'ny làlana ny fihetsiny — Làlana Brandreth,” hoy izy.
”Tonga hividy fitaovana vitsivitsy miaraka amin'ny raiko aho. Ary raha nametraka fanontaniana aho, saiky tsy hamaly ahy ilay lehilahy. Ary tao aorian'izay ny raiko dia nihomehy fotsiny, niteny hoe tsy mampihomehy ve ny tsy nahazoanao valiny avy any amin'iny lehilahy iny,” hoy i Malik mahatsiahy. ”Hoy aho, tsia — tsy mampihomehy izany. Ny zava-nitranga dia amin'ny ankapobeny nampietry ahy tamin'ny maha-vehivavy ahy izy ary nihevitra fa tsy mendrika haja ny miresaka amiko. Araka izany, misy karazana fihetsika roa azonao eny amin'ireo toeram-pivarotana. Na izy mijery feno fitsiriritana any aminao dia manao izay tsy mampahazo aina anao, na tsy mijery anao fotsiny izao.”
Vehivavy maro miantsena ao amin'ny Tsena Liberty ao Lahore, Pakistàna. Sary : Carolyn Beeler/PRI
”Mino ao fa ny lehilahy eto, ny zavatra ataony dia — angamba any Amerika dia toy izao, ‘Eh ry malala, manao ahoana izato izy?’ — fa eto izy ireo dia manomboka mihira mangingina ireo hira Bollywood. Na manomboka misioka amin'ny fomba tsy mendrika ary manontany tena fotsiny ianao, izaho ve no nanintona izany?” hoy i Malik manampy.
Namorona andiana sary maromaro nantsoiny hoe #VehivavyAmin'nyToeranaHoAn'nyOlonDrehetra (#WomenInPublicSpaces) i Malik.
”Matetika aho no tratran'izany — Imbetsaka aho no manao pataloha jeans ary mivavaka ihany koa aho mba ho toy ny hoe, ‘tsy mitovy amin'ny olona mivavaka ianao’. Ary tsy mitombina izany fihetsika izany amiko. Voarara ao amin'ny fivavahana islamista angaha ny jeans? Maninona izany no atao zavatra? ” Hoy izy.
”Mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreniko aho ary ry zareo no mandidy ahy amin'ny hamaroan'ny sosona tokony hanaovako ary niresaka mikasika izany tamin'ny reniko aho raha tamin'izany taona izany — ary efa tena antitra aho izao, efa taompolo telo izay no nandalo teto amin'ity Tany ity — ary hoy aho amin'ny [toe-javatra] inona ianao no hiombon-kevitra amiko raha mivoaka any ivelany miakanjo izay tiako hotafiana aho, dia nieritreritra ny momba izany izy. Ary hoy aho, mila isa aho, taona firy — ary nieritreritra teo izy sady niteny hoe na oviana na oviana.”
Ary izany no ivon'ny sarin'i Malik.
Tokony zavatra tsy mahatalanjona ny mahita vehivavy any ivelan'ny trano, na manao pataloha jeans ianao na kurta na zavatra hafa dia tokony hety foana. Tokony tsy hanahirana izany. Fa ny zava-misy dia midika hoe mila mitranga ity resaka ity,” hoy izy.
Matetika raisina ho tsinontsinona ny vehivavy raha miantsena ao amin'ny Lalana Brandreth ao Lahore. Sary : Carolyn Beeler/PRI